Bishnu Rimal's Website » विविध विषय
मेरो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो: सहयोग, ऐक्यवद्धता र शुभेच्छाको लागि सबैमा हार्दिक आभार !
कोरोनाको अनुभव व्यक्ति–व्यक्तिमा फरक–फरक छ । कोही लक्षण सहितको संक्रमित हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अनुभवले भन्छ– यसले पीडा दिन्छ, गाल्छ । ज्यानै गए अन्तिम अवस्थामा आफन्तहरुले मुख समेत हेर्न पाउँदैनन् । कोही लक्षण...
नयाँ बर्ष २०१८ को हार्दिक शुभकामना !
कमरेडहरु, साथीहरु वर्ष २०१७ मा हामीले राज्यका तीनवटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरयौं– अपेक्षित उपलव्धी सहित । यससंगै राजनीतिक संक्रमणकाल मूलतः अन्त्य भयो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै स्थायीत्व...
दुःख गर्न सक्ने र सुखको सपना देख्ने एक कलाकारलाई श्रद्धाञ्जलि !
उनले मजदुरको ‘परिभाषा’ दिए– मजदुर भनेको के हो ? मजदुर भनेको दुःख गर्न सक्ने, तर सुखको सपना देख्ने मानिस हो । त्यसैले मेरो चारवटा सामान्य सुझाब छ–मिठो बोल, म अलि...
बधाइ सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय!
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफण्ट) र यसमा आवद्ध झण्डै ४ लाख सदस्यहरुको तर्फबाट म सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । उहाँलाई राष्ट्रपतीको उम्मेदवार बनाउने उपयुक्त निर्णय गर्ने...
नयाँ संविधान हाम्रो हो, यसमाथि हाम्रो आफ्नो स्वामित्व छ । तसर्थ, हामी नयाँ संविधानको हार्दिक स्वागत गर्छौ ।
आमा, त्यो आउँछ र ? “हो, बा, त्यो आउँछ । त्यो बिहानको सूर्यझैँ उज्यालो छर्दै आउँछ । त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीतजस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ; त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ...